Waziyn – AsiaApps
December 13, 2018 WaziynReviewsNo Comment on 2018 ခုနှစ်အတွက် Playstore ပေါ်ကအကောင်းဆုံး App များ (Part -1)
မင်္ဂလာပါ AsiaApps ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…….။ ဘာလိုလိုနဲ့ 2018 ဆိုတဲ့ နှစ်တစ်နှစ်ကိုကျော်ဖြတ်ရမယ့်အချိန်ကလည်းနီးလာပါပြီနော်။ လုပ်ငန်းတွေအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံး 2018 အတွက်နှစ်ချုပ်တွေလုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာ Google ရဲ့ Playstore ကလည်း 2018 အတွက်အကောင်းဆုံး Application များဆိုပြီး စာရင်းတစ်ခုကိုချုပ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ Playstore…
သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်တွေမှာ အပျင်းပြေစေမယ့် WZ Comic
October 19, 2018 WaziynReviewsNo Comment on သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်တွေမှာ အပျင်းပြေစေမယ့် WZ Comic
Hello….. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ဘာလိုလိုနဲ့သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်ဆိုတာကြီးလည်းနီးလာပြီနော်။ အချို့တွေကသီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်ကိုမျှော်နေကြပေမယ့် ပိတ်ရက်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိပဲအိမ်တွင်းအောင်းမယ့်သူတွေလည်းရှိနေမှာပါ 😛 ။ အခု article လေးကအထူးသဖြင့်အဲ့ဒီလိုအိမ်တွင်းအောင်းမယ့်သူလေးတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်😉 ။ အိမ်မှာနေရင်းဂိမ်းတွေဆော့၊ Tv တွေကြည့်ရတာပျင်းလာခဲ့ရင်….. ဖုန်းကနေတစ်ဆင့်မြန်မာဘာသာနဲ့ကာတွန်းစာအုပ်လေးတွေဖတ်လို့ရစေမယ့် WZ Comic ဆိုတဲ့ app လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။…
ဆေးသောက်ချိန်တွေကိုသတိပေးနေမယ့် Mr. Pillster app
October 12, 2018 October 15, 2018 WaziynApp NewsNo Comment on ဆေးသောက်ချိန်တွေကိုသတိပေးနေမယ့် Mr. Pillster app
တချို့တွေကဆေးသောက်ဖို့ဆိုရင်အရမ်းကြောက်ကြတယ်။ တချို့ကအလုပ်များပြီးတော့ဆေးသောက်ဖို့ကိုမေ့တတ်ကြတယ်။ အနည်းငယ်ပြန်သက်သာလာပြီဆိုတာနဲ့သောက်ဖို့ဆေးတွေကို မသိမသာမေ့လျော့ပြစ်လိုက်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ ဒီလိုတွေဆေးသောက်ဖို့မေ့ရင်တော့ ခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာတွေကအလွယ်တကူသက်သာတော့မှာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ဒါမျိုးတွေမဖြစ်ရလေအောင်…..သင့်ကိုအချိန်မှန်ဆေးတိုက်မယ့် application လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Mr. Pillster လို့အမည်ရတဲ့ app လေးဟာ medical tool အမျိုးအစား app…
အရာအားလုံးကိုသင်ယူနိုင်မယ့် Khan Academy
October 4, 2018 WaziynReviewsNo Comment on အရာအားလုံးကိုသင်ယူနိုင်မယ့် Khan Academy
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ…..။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Playstore ရဲ့ editor’s choice ဖြစ်တဲ့အပြင်စာရေးသူကိုယ်တိုင်သဘောကျသွားခဲ့ရတဲ့ app လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ နာမည်လေးကတော့ Khan Academy လို့ခေါ်ပြီး ပညာရေးပိုင်းကိုအထောက်အကူပြုတဲ့ education app လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ဘာအချက်တွေကြောင့် playstore…
Business Card Maker နဲ့ကိုယ်ပိုင်ကဒ်လေးတွေလုပ်ကြမယ်
October 2, 2018 October 2, 2018 WaziynReviewsNo Comment on Business Card Maker နဲ့ကိုယ်ပိုင်ကဒ်လေးတွေလုပ်ကြမယ်
သင်ဟာလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်လား? ဒါမှမဟုတ် graphic designer တစ်ယောက်လား? ဒါဆိုရင်တော့သင်အခုစာပိုဒ်ကိုဖတ်မိတာမှန်သွားပါပြီ။ သင့်အတွက်လုံးဝအသုံးဝင်မယ့် app လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ App လေးကတော့ Business Card Marker လို့ခေါ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့နာမည်အတိုင်းပဲကိုယ်ပိုင် business ကိုကိုယ့်ရဲ့ smart phone…